ऐस्पन - एक रूख, जो एक दन्त्यकथा धेरै
ऐस्पन - रूख सजिलो छ। यो पनि लोकप्रिय रूपमा रहस्यमय र श्राप उल्लेख छ। र किन यो यति भन्न छ, तपाईं आज सिक्न पक्का छन्। यो एक ठूलो छ अनित्य रूख Willow को परिवार स्वामित्वको, जो को उचाइ कहिलेकाहीं 35 मीटर पुग्न सक्दैन। सेतो काठ एक विशिष्ट greenish रङ्ग छ। र सबै भन्दा चाखलाग्दो कुरा, यो रूख को उमेर निर्धारण गर्न असम्भव छ। आखिर, यो सामान्यतया कट मा छल्ले द्वारा पहिचान, र तिनीहरूलाई देख्न सक्दैन ASPEN छ। तर हामी औसत रूख 90 150 वर्ष देखि बसोबास भनेर थाह छ। ऐस्पन को जंगल मा वा ponds को बैंकहरू, सूखी बालुवा, clearings र swamps मा दुर्लभ मा अक्सर पाउन सकिन्छ। त्यो एक धेरै छ छिटो बढ्दै, ल्यान्डस्केपिङ्ग क्षेत्रहरूका लागि यसको प्रयोग हाल को वर्ष मा त छ। ऐस्पन - राम्रो नै बढाउँछ जो पलिश गर्न रूख, त्यसैले यसलाई व्यापक वस्तुहरूको निर्माण मा प्रयोग गरिन्छ बगैचा उपकरण को। पनि किनभने यो लग-गड्ढे, यस्तो काठ पानी डर छैन रूपमा बनाउँछ। मा पुरानो दिन उनको hive, गुँडमा बक्स, भान्सा बर्तन र birdhouses देखि गाउँमा कारीगरों मालिकको।
रूख श्राप - किन Aspen भनेर विश्वास?
तिनीहरूले यो केवल किनभने कुनै पनि विश्वास कतै बाहिर खडा गर्न सक्दैन भन्छन्। त्यहाँ Aspen धोका गऱ्यौ जसमा धेरै मसीही दन्त्यकथा छन्। उदाहरणका लागि, उडान द्वारा बच जंगल मा भर्जिन र बाल, हरियो सबै बासिन्दाहरू तल र मात्र मरिरहेका गर्दा "श्राप" रूख उनको धोका र बाटो औंल्याउनुभयो। र यहूदा आफूलाई रचनाहरू चाहन्थे, त्यो कुनै पनि रूख बर्च यसको शाखा गर्न अनुमति थिएन, नासपाती आशुक्रोधी thorns spooked र ओक - शक्ति। तर Aspen उहाँलाई काट्न थिएन, र खुसीसाथ पात rustled। मानिसहरूले यसलाई श्राप छ किन कि छ। जादूटुना देखि सुरक्षा को एक उत्कृष्ट माध्यम - अझै पनि कि Aspen वन विश्वास गरे। यो सबै ऊर्जा र de-energizes अवशोषित। कुनै आश्चर्य को छडी को हृदय मा पिशाच एक खम्बा।
ऐस्पन - रूख, तपाईं लेखमा देख्न सक्नुहुन्छ फोटो जो नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित को सक्षम छ। तिनीहरूले समस्या को छुटकारा प्राप्त गर्न र प्राप्त समस्याहरूको छुटकारा चाहनुहुन्छ जब उनको सामान्यतया जानुहोस्। यो तपाईं उनको दुखेको स्थान छुन भने, यो सबै रोग नै लाग्न र व्यक्ति सजिलो हुनेछ भने छ। तर एकै समयमा, एक बारुला संग धेरै लामो कुराकानी टाउको दुखाइ, वाकवाकी, निराशा र निदाउरोपनको हुन सक्छ। त्यसैले, यो संग सम्पर्क 15 मिनेट भन्दा बढी हुँदैन। को रेपिड को निर्माण को लागि प्रयोग पुरानो ऐस्पन काठ मा। तिनीहरूले यसरी घर को मालिक सुरक्षा, अतिथि घर बाहिर सबै नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित कि यो विश्वास थियो। गाउँमा Aspen रूखहरू चार कुनामा गर्न कट र अड्केको यस्तो हैजा रूपमा विभिन्न रोगहरु बाट बासिन्दाहरू सुरक्षा।
ऐस्पन - यसको छाल, पात, तन्तु र जवान मार द्वारा मूल्यवान छ कि एक रूख। यी कच्चा माल आधारित तयारी, रोगाणुरोधी antitussive र विरोधी भडकाऊ कार्यहरू छ। तिनीहरूले व्यापक चेचक, क्षयरोग, झाडापखाला, cystitis, सिफलिस र धेरै अन्य रोगहरु को उपचार मा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू बाहिरबाट घाउ, बल्न र अल्सर को निको लागि प्रयोग गरिन्छ।
खैर, अब, र तपाईं जहाँ यो बढ्छ र के असामान्य गुण छ के, एक Aspen-रूख गठन सजग हुन्छन्।
वर्णन, संरचना र विशेषताहरु: संसारमा फूल को सबै भन्दा सुन्दर फूलगुच्छा
लगुना - यो प्रकृति को एक अद्भुत सृष्टि हो। नयाँ lagoons को गठन को सुविधाहरू
संसारमा सबै भन्दा ठूलो ताल कहाँ छ?
Irtysh नदी - संसारको सबैभन्दा ठूलो tributary
Meadows: वर्णन, विशेषताहरु। वनस्पति र soils भर Meadows
Ust-निक्षेप Tegusskoe: विवरण र फोटो
किन मशरूम gorchat - धेरै जवाफ
Pentium डी: विशेषताहरू, समीक्षा, समीक्षा। प्रवेग Pentium डी प्रोसेसर
टेबलपून, मिठाई, र चियाको सही रकम कसरी थाहा पाउनुहोस्
दबाइ "Asparkam": किन आवश्यक छ?
Morgagni-स्टीवर्ट-Morel सिंड्रोम के हो?
पत्र7टाउन हल (Clans को झडप): भवनहरु र सिफारिसहरू को पङ्क्तिबद्ध
Alexei Zemsky - जीवनी र गतिविधिहरु
प्रभावकारी माध्यम 'Levomekol' - मलम निर्देश पुस्तिका
कसरी फोन आफैलाई मार्फत इन्टरनेट जडान गर्न
ठूलो मानिस र आफ्नो जीवनी। Uilyam Shekspir